ထူးကဲတဲ့အရသာကို လျှာထိပ်ဖျားကနေစပြီး လည်ချောင်းထဲစီးဝင်တဲ့အချိန်အထိ တမြေ့မြေ့ခံစားရရှိနိုင်စေဖို့….. – FoodiesNavi
ထူးကဲတဲ့အရသာကို လျှာထိပ်ဖျားကနေစပြီး လည်ချောင်းထဲစီးဝင်တဲ့အချိန်အထိ တမြေ့မြေ့ခံစားရရှိနိုင်စေဖို့…..
By yin sandi On February 13, 2018 0
အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ရှယ်ဟင်းလျာတွေကို ? ? ? ကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် VIP တွေကိုဧည့်ခံချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ? ? ဆိုင်ရွေးချယ်ဖို့ခေါင်းစားနေရသူတွေအတွက် Foodies Navi ကနေဟင်းလျာအစုံအလင်ကို ? ? ? တစ်နေရာတည်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ Crystal Jade Kitchen ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ? ? ဒီဆိုင်လေးကိုတော့ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့်ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ Junction City နဲ့ ? ? ? ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဝင်ပေါက်အမှတ်(၁)တို့မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Crystal Jade Kitchen မှာဆိုရင်တော့ ? ပါးလွှာတဲ့ဆယ်လ်လမွန်ငါးအသားလွှာ ၊ ? ? အသင့်ပြင်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ? ? ထူးခြားတဲ့အချဉ်ပွဲတွေ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့ Cantonese စတိုင်ငါးပါဝင်တဲ့ ကံကောင်းခြင်းဆလပ်ဟင်းပွဲ ? ? ၊ ပါဝင်ပစ္စည်း ၊ အရသာ ၊ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့အရောင်အသွေးစုံလင်မှုတွေကြောင့် ? ? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အကောင်းဆုံးဟင်းလျာတွေအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ ဟောင်ကောင်စတိုင်ဟင်းလျာတွေ ၊ ? ? အရည်အသွေးမြင့်ဆန်ကို လတ်ဆတ်တဲ့အသားနဲ့ ? ? ဆေးဘဲဥတို့ကိုပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ? ? ဝက်ဆေးဘဲဥပြုတ် ၊ လတ်ဆတ်ချိုမြနေတဲ့ပုဇွန်စစ်စစ်နဲ့ ? ? နူးညံ့တဲ့ကြက်ဥခေါက်ဆွဲတို့ရဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အတွဲအစပ်တွေကြောင့် ? ? ဟင်းရည်နဲ့ပဲစားစား ၊ ဟင်းရည်မပါဘဲစားစား အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ? ? ပုဇွန်ဝမ်တန်ခေါက်ဆွဲ ၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့ဝက်နံရိုးကို ? ဆေးဖက်ဝင်ရေမုန်ညင်းနဲ့ ? ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ရေမုန်ညင်းဝက်နံရိုးဟင်းရည် ၊ ဘေကျင်းမှာဘဲကင်စားနေရသလို ? ? ခံစားသွားစေမယ့် ပီကင်းပဲကင် စတဲ့ဟင်းလျာပေါင်းမြောက်မြားစွာကို မှာယူသုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Crystal Jade ရဲ့ဝါရင့်စားဖိုမှူးကြီးများကိုယ်တိုင် ??‍? ??‍? ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတာကြောင့် အရသာကတော့တုနှိုင်းဖွယ်ရာမရှိအောင် ? ? ထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းလှပါတယ်။ အရသာရဲ့အရည်အသွေး ၊ အနံ့ရဲ့အရည်အသွေး ၊ ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အရည်အသွေးတွေ အပြည့်အဝပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ? ? စားသုံးသူတွေကိုစိတ်တိုင်းကျစေနိုင်မှာပါ။ နူးအိလတ်ဆတ်တဲ့အသားငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြားထဲတိုးဝှေ့နေတဲ့ အရသာစိမ့်ဝင်မှုတွေဟာလည်း ? ? လျှာထိပ်ဖျားကနေစပြီး လည်ချောင်းထဲစီးဝင်တဲ့အချိန်အထိ တမြေ့မြေ့ခံစားရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰ ⏰ မနက်(၉)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/crystaljademyanmar
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကြိုက်သူတွေအတွက် အရသာလည်းကောင်းစျေးနှုန်းလည်းချိုသာတဲ့ Spicy Taste….